Abathengisi Bangayikhulisa Kanjani Imikhankaso KaKhisimusi Yeselula Ukukhuthaza Imali Engenayo | Martech Zone
Ngalesi sikhathi sikaKhisimusi, abathengisi kanye namabhizinisi bangakhuphula imali ngendlela enkulu: ngokumaketha kwamaselula. Ngawo nje lo mzuzu, bangu-1.75 billion abanikazi bama-smartphone emhlabeni wonke nezigidi eziyi-173 e-US, okubalwa ukukhuphuka kwama-72% emakethe yamaselula eNyakatho Melika.
Ukuthengwa kwe-inthanethi kumadivayisi eselula kusanda kudlula ideskithophu okokuqala futhi ama-52% wokuvakashelwa kwamawebhusayithi manje enziwa ngomakhalekhukhwini. Noma kunjalo, isikhathi sokuhlala sabathengi ezinhlelweni zokumaketha ezinjenge-imeyili zingaba yimizuzwana emithathu nje. Ukuqonda ulwazi lomsebenzisi weselula kubaluleke kakhulu kubathengisi ukuze bandise imizamo yezentengiso futhi bathuthukise ukuthengisa ngesikhathi samaholide.
Ngokubeka iselula maphakathi necebo le-omni-channel, abathengisi nemikhiqizo bazonika amandla izinga elisha lokuxhumana, ukuzibandakanya, ingxoxo nokwethembeka. Nemali engenayo. I-FitForCommerce
I-SmartFocus inikeza ukuqonda okuthile kufayela layo le- Izeluleko Zokumaketha Kwamaselula kubamakethi kanye namabhizinisi. Nakhu ukubuka kancane izeluleko ezi-5 zokumaketha kweselula zenkampani.
Lungiselela iselula - Abathengi abangama-30% beselula bayashiya okwenziwayo kokuhlangenwe nakho kwabo komsebenzisi akulungiselelwe idivayisi yabo ephathekayo. Qiniseka ukuthi ama-imeyili akho abukeka emangalisa kuwo wonke amapulatifomu.
Cabanga nge-Akhawunti Isikhathi, Indawo, nokusondela Kwamakhasimende Akho - Qonda ukuthi amakhasimende akho eselula asondele kuphi, kuphi futhi kanjani lapho esesha Ungamangala ukuthi mangaki amakhasimende ongawafaka ngokuya ngokukhangisa kumakhasimende ngokuya ngalezi zinto ezilula, okukuvumela ukuthi usebenzise imikhankaso yakho futhi ekugcineni ukwandise ukuthengisa.
Vimbela Showrooming futhi Lungiselela Ukwakhiwa Kwewebhu - Showrooming ingaphansi kokufanelekile uma kukhulunywa ngokuthengisa okuthengiswayo phakathi namaholide. I-Webrooming (eyaziwa nangokuthi i- ukuhlanekezela ukubukisa), ngakolunye uhlangothi yilokho okwenzekayo lapho abathengi becwaninga imikhiqizo online ngaphambi kokuya esitolo ukuyothenga lokho kuthenga. Ngokusho kweForrester Research, ukugcotshwa kwewebhu kuzoholela ekuthengisweni kuka- $ 1.8 trillion ngo-2017, ngenkathi ukuthengiswa kwe-ecommerce kufanele kufinyelele ku- $ 370 billion ngonyaka ofanayo; i-webrooming kulapho abazowina ngokuzayo bezitolo bezobusa khona. Kubalulekile ukudala okukhuthaza amakhasimende ukuthi angene esitolo sakho futhi empeleni athenge imikhiqizo yakho esikhundleni sokuyithola ku-inthanethi ngentengo ephansi kuwebhu.
Yenza Ukusesha Kweselula Kulula - Ama-57% wamakhasimende ahambayo azolahla isiza sakho uma kufanele alinde imizuzwana emithathu ukuthi ikhasi lilayishwe. Eqinisweni, njalo ukukhuphuka kwama-millisecond ayi-100 esikhathini sokulayisha kunciphisa ukuthengiswa ngo-1%. Qiniseka ukuthi amakhasi akho alayisha ngokushesha futhi enzelwe ukufinyelela kuselula.
Sebenzisa i-Beacon Technology - ukusondelana nokumaketha idlala indima entsha ebalulekile ekuvaleni ukumaketha okuku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi ngobuchwepheshe bokuncoma bokuqagela obenza imilayezo yokuthengisa ibe ngeyakho uqobo kubasebenzisi ngabanye ngokuya ngendawo yabo, indlela yokuziphatha yokuthenga ebonakalayo kanye nomongo, kanye nomongo wezinqumo zabo zokuthenga ezingaba khona. I-SmartFocus ingumholi kubuchwepheshe be-beacon futhi iyisebenzisela ukunikeza imininingwane ejulile kumakhasimende ayo.
Ukuthola ukuqonda okugcwele, qiniseka ukuthi uvakashela i-SmartFocus ' Izeluleko Zokumaketha Kwamaselula kubamakethi kanye namabhizinisi.
Tags: ubuchwepheshe beaconukhisimusi weselulaukulungiselelwa kweselulausesho lweselulaukusondelana nokumakethaukuhlanekezela ukubukisaukubukisai-smartfocusukumaketha kweselula kwe-smartfocusukugconwa kwewebhu
Imikhankaso ye-Multi-Channel B2C Yazi Ukubuyiselwa Okukhulu okungu-24% Kwezotshalomali